Sidee ayay u muuqanaysaa Shaxda Kooxda Barcelona haddii lagu daro Pierre-Emerick Aubameyang? – Gool FM
(Barcelona) 25 Jan 2020. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo baxayey wararka sheegaya in weeraryahanka kooxda Arsenal ee Pierre Emerick Aubameyang uu u dhaqaaqayo dhinaca Barcelona iyo Garoonka Camp Nou.
Jariiradda Mundo Deportivo ee ka soo baxda dalka Spain ayaana sheegtay in Kooxda Barcelona ay doonayso inay Aubameyang ka dhigato bedelka Lius Suarez ee dhanka weerarka.
Saxiixa Pierre Emerick Aubameyang oo 30-sano jir ah ma’ahan mid fudud, maxaa yeelay isagu waxa uu xiddig sare ka yahay Arsenal, kooxda ka dhisan Magaalada London ayaanan doonayn inay si sahlan ku lumiso Weeraryahankeedan halista badan.
Kooxda Barcelona ayaana isku dayi doonta inay la soo saxiixato isaga, laakiin waxa ay ogyihiin inay tahay middaasi arrin dhib badan.
Xiddiga xulka qaranka Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang waxaa heshiiskiisa kooxda Arsenal kaga harsan 18 bilood, waxaana la la xiriirinayaa inuu ka dhaqaaqi doono garoonka Emirates.
Haddaba su’aasha la isweydiinayo ayaa ah sidee ayay u muuqanaysaa shaxda Kooxda Barcelona haddii lagu daro Pierre-Emerick Aubameyang?